Best Oke Adọrọ Mmasị Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Best Oke Adọrọ Mmasị Na Europe
E nwere ọtụtụ ihe nke oké nkiri na Europe. Adrenaline achọ na ndị hụrụ oké egwuregwu nwere ike ahụmahụ dị iche iche na European ebe na a dịgasị iche iche nke omume. Ọ bụrụ na ị na-eche otú ọ ga-e ụgbọ okporo ígwè, anyị ị kpuchie, oke! Ebe a na-anyị n'elu họpụta mmadụ maka kasị mma oké mmasị na Europe:
Best Oke nkiri na Europe – Innsbruck, Austria
N'ihi na ihe adrenaline-ịkpatawo ụbọchị, anya ọ gara n'ihu karịa Innsbruck na Austria. E nwere ọtụtụ ihe na-eme, ma ị na-achọ udo ma ọ bụ obi ụtọ. ezie na ọtụtụ njem nleta gaa Innsbruck kpomkwem n'ihi na nke idyllic anya, Ọ nwere ọtụtụ ihe na-enye. I nwere ike na-enwe a bobsleigh ride na Olympiaworld, iri a ọwụwụ mapụ europabrücke ma ọ bụ gaa ski. Nature bụ breathtaking, na echiche na-ịtụnanya. Ihe ọ bụla ị na-ahọrọ ime na Innsbruck, otu ihe bụ n'ihi na n'aka - ị ga-abụ gwụ. Ma i nwere ike mfe iru ya ụgbọ okporo ígwè. Ọ na ejikọ ndị ọzọ nke Austria na ndị ọzọ isi European okporo ígwè n'ógbè nlekọta ọrụ.
Munich na Innsbruck Ụgbọ oloko
Oberstdorf na Innsbruck Ụgbọ oloko
Oke nkiri na Interlaken, Switzerland
Switzerland nwere ike ọ gaghị na-akpa mba i na-eche nke mgbe isiokwu bụ Best Oke nkiri na Europe. Otú ọ dị, mbu anya na-nwere ike ịbụ na-eduhie eduhie. Interlaken-atụle ga-otu nke kasị hotspots maka oké egwuregwu na Europe. Ọ bụ a mara mma na mpaghara n'ụzọ zuru ezu kwadebere igbo pụrụ ichetụ n'echiche nke ihe adrenaline achọ. Ụfọdụ ndị na-eme na Interlaken na-paragliding, rafting, ọwụwụ jumping, na canyoning. eru Switzerland bụ inweta ụgbọ okporo ígwè, dị ka e nwere ụzọ gasị si mba ndị agbata obi na obodo na Europe.
Adọrọ Mmasị na Le Marche, Italy
Ebe Ọwụwa Anyanwụ Italytali na-akasị mara maka ya art, omenala na culinary ebube. ka, a aha apụtaghị na ọ dịghị ihe ọzọ ka a mara mma na mpaghara. Le Marche bụ ma ama n'ihi na otu onye pụrụ iche na-atụghị anya ihe mere. Ọ na-ese akwa mgbe ị na-awụlikwa elu nke a ụgbọelu efe efe gafere ya. Ahụmahụ skydivers mara nke a, ma Le Marche bụkwa a akwa ebe na-nwalee Oke nkiri na Europe na karịsịa mwụpụ ebe maka oge mbụ. Ọ bụrụ na a na-ada na-akpali akpali gị, ị pụrụ a obi ụtọ, sinik ụgbọ okporo ígwè nọkwasi site Italy ka Le Marche.
Florence na Macerata Ụgbọ oloko
Florence na Jesi Ụgbọ oloko
Rome ka Ancona Ụgbọ oloko
Rome ka Pesaro Ụgbọ oloko
Oke na Mont Blanc
Dị ka ndị kasị elu elu niile nke Europe, Mont Blanc mgbe dọtara ya ngosi òkè nke ọbịa. Ọrịrị n'elu elu ugwu ahụ abụghị maka nāda # mbà nke obi, nke bụ ya mere njem nleta na-achọ a na-akpali akpali hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Mont Blanc kwere nkwa njem, ịrịba ama na breathtaking mma, na ya virus a ịma aka bụghị onye ọ bụla nwere ike izute. ọ ezumike zuru oke ebe maka ndị na-achọ oké mmasị na Europe. Ma ọ bụrụ na ị bụghị na ọnọdụ maka arịgo, ị ka nwere ike na-enwe Mont Blanc site paragliding. Nhọrọ, inyocha a glasia na otu n'ime ọtụtụ eduzi treks na-ewu ewu na mpaghara. Ị nwere ike iru obodo nke Chamonix site ụgbọ okporo ígwè na mgbe njem ka Mont Blanc n'ụgbọ ahụ Mont Blanc Express.
Ị na-achọ gị ọzọ adrenaline-jupụta Oke nkiri na Europe?
Lee ọ gara n'ihu karịa ndị a gabigara ókè na-adọrọ mmasị. All ndị a ebe-adị mfe iji ụgbọ okporo ígwè, All ị ga-eme bụ AKWỤKWỌ gị tiketi na-eme atụmatụ gị na njem!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-extreme-attractions-in-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#oké #traveleurope njem europetravel Tranride Train Travel travelaustria travelswitzerland